မြန်မာနိုင်ငံကို စတုတ္ထမြောက် Operator အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတော့မယ့် MyTel! – AsiaApps
မြန်မာနိုင်ငံကို စတုတ္ထမြောက် Operator အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတော့မယ့် MyTel!
February 14, 2018 February 14, 2018 WilliamFeaturesNo Comment on မြန်မာနိုင်ငံကို စတုတ္ထမြောက် Operator အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတော့မယ့် MyTel!
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ MPT, Oredoo, Telenor အစရှိတဲ့ Operator တွေနေရာယူအပြီးမှာတော့ မကြာခင်မှာပဲ MyTel အမည်ရှိတဲ့ Operator ဟာ ၂၀၁၈ မတ်လကစတင်ပြီးနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTel ဟာ ဗီယက်နမ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Viettel နဲ့ ပြည်တွင်းမှာကုမ္ပဏီတွေပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Myanmar National Telecom Holding ပူးပေါင်းပြုလုပ်ထားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံနီးပါးအထိရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ Operator တစ်ခုပါ။ ပူးပေါင်းမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ ဗီယက်နမ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Viettel ကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံကျော်မှာ Mobile ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Telecom ကုမ္ပဏီ ၃၀ ထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်တွင် MyTel ၏ ကိုယ်ပိုင်အရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ရှိနေပြီဖြစ်ကာ မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို လာမည့် မတ်လထက် နောက်မကျဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Mytel ၏ Chief External Relation Officer ဦးဇော်မင်းဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မတ်လထက် နောက်မကျဘဲ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
MyTel Myanmar ဟာစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိန်းအမှတ်အနေနဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကိုလည်းပြုလုပ်ထားပါသေးတယ်။ ကံစမ်းမဲရဲ့ပထမဆုကတော့ 2017 Lexus LX570, ဒုတိယဆုကတော့ Apple iPhone X, တတိယဆုကတော့ Apple iPhone 8 Plus နဲ့ စတုတ္ထဆု Samsung Galaxy Note 8 ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ကံစမ်းလိုသူတွေအနေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို MyTel Facebook Page ကနေတဆင့်သွားရောက်စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTel ရဲ့ mySIM လေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဘယ်လောက်အထိအကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ မတ်လ မဆုံးခင်မှာပဲတွေ့မြင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : MyTel Facebook
MyTel, New Operator
ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ Video တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့် App နှစ်ခု Triller and Filmr